Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan dib Files o
Waa mid aad u fudud in ay xiriir undelete ka telefoonada Android. Waxa kaliya ee aad qaadataa 2 ama 3 daqiiqo si ay u gaarto goolkii. Read More >>
Ma tirtiray farriimaha Facebook kac ahayn? Ha welwelin! Waxaad soo kabsado tirtiri karaa farriimaha Facebook ka iPhone, iPad iyo iPod taabto. Read More >>
Ma doonaysaa in ay dib u soo ceshano SMS lumay ee aad Sony Xperia Z? Kan waa hage mid kugu haboon! Waxaad ka heli kartaa arrin lagu sameeyey 5 daqiiqo. Hubi in oo hadda aad u hesho! Read More >>
Files lumay kadib markii nidaamka soo celin, waxaana jira gurmad lahayn? Maqaalka halkan idin ​​Toosiya si aad u hesho files lumay talaabo talaabo ah. Qaado isku day ah oo bilaash ah! Read More >>
Files tirtiray ka Nokia N97? Ha argagax weyn. Waxaa macquul weyn inuu ka soo kabsado sawir tirtiray, video iyo maqal ah ka telefoonada Nokia N97. Read More >>
Nokia N8 / N9: Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray iyo faylasha? Tilmaan-bixiyahan waxa uu kuu sheegayaa si qumman oo wax kasta dib u soo ceshano in 3 tallaabo. Read More >>
Card 5800 xusuusta Nokia iskharribeen, baahida loo qabo inay ka soo kabsadaan photos! Haddii kaadhka xusuusta aad jir ahaan ma u burburay. Waxaad ka heli kartaa dhammaan faylasha dib shaki ku jirin. Read More >>
I CAAWI!! Kabsado tirtiray sawir / video ka Nokia? Waxaad si fudud u soo kaban karto, tirtiray videos iyo sawiro ka telefoonada Nokia ee 3 tallaabo. Akhri hagahan halkan. Read More >>
Iska aad macruufka 9 qalab ku xayiran in hab kabashada? Tilmaan-bixiyahan waxa bara sidii aad u heli u xalin in 5 minites keligaa. Read More >>
Raadi dhabarka laga badiyay .ppt iyo .pptx files aan khasaaro tayo leh software kabashada PPT si loo badbaadiyo waqtiga madadaalada. Read More >>
Waxaan ku qor soo baxay 9 iPhone Data Recovery barnaamijyada Software lacag la'aan ah oo aad u isticmaali karaa on your computer Windows, ama Apple MAC, iyo garab, waxaan ka mid ah dib u eegista ka soo top sar portals warbaahinta bulshada. Read More >>
Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa sida ay u soo celiyaan aad iPhone ka Lugood iyo iCloud files gurmad. Geedi socodka waa quruxsan fudud in la raaco. Read More >>
Email A tirtiray aan run ahaantii weligiis tirtirayaa. Waxaad soo kaban karto email tirtiray la barnaamij soo kabashada macluumaadka ka hor inta uu overwritten. Hubi in si aad u hesho faahfaahin. Read More >>
Maqaalkani waxa uu idin ​​tusiyo liiska ugu sareeya ee iCloud software free extrator gurmad labada Windows iyo Mac. Hubi in si aad u hesho liiska hadda. Read More >>
Haddii aad si qalad ah formatted kaadhka xusuusta iyo dhammaan faylasha lumay, waxaad ka akhrisan kartaa hagahan si ay u qabtaan qaab kaadhka xusuusta kabashada fudayd. Read More >>
SD Micro waa aamin iyo hab ah in la hubiyo in xogta ee user la badbaadiyey gudahood kaarka si ay u helaan waa marnaba si sahlan. In Eraygii SD micro shuruudaha SD u taagan tahay ammaan digital iyo th Read More >>
Labadan qalab lagu imtixaami oo waaaweyn ee soo kabashada sawir aad mar kasta oo aad sawiro dabacsan ka card SD ah gaar ahaan Read More >>
Card SD formatted loola jeedaa kaydinta ah oo uu soo tirtirayaa si loo heli karo. Waxaa caadi ah in qaab kaararka SD gaar ahaan marka ay ku kharribeen ama noqon non functional. Read More >>
Waxaa loo sameeyay dadka nooc kasta oo dib u soo kabashada soo kabashada 7 xogta card waa mid ka mid ah kuwa barnaamijyada la heli karo oo lacag la'aan ah internet-ka iyo marka ay timaado lacag la'aan ah wax ku oolnimada iyo g waxtarka Read More >>